YBS ခရီးသည်တင်ယာဉ်(၁)စီးနှင့် မီနီဘတ်စ်ယာဉ်(၁)စီးတိုက်မိကာ (၆)ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ~ Myanmar Online News
YBS ခရီးသည်တင်ယာဉ်(၁)စီးနှင့် မီနီဘတ်စ်ယာဉ်(၁)စီးတိုက်မိကာ (၆)ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ
8:20 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
(၁၉.၁၁. ၂၀၁၉-အင်္ဂါနေ့) ၊ နံနက် (၀၇:၀၀) နာရီအချိန်ခန့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်ကမ္ဘာအေးဗီလာရှေ့တွင် YBS ခရီးသယ်တင်ယာဉ်(၁)စီးနှင့် မီနီဘတ်စ်ယာဉ်(၁)စီးတို့ တိုက်မိပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၆)ဦးခန့်ရှိကြောင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ အား K-Ambulance ၊ မြန်မာ့ကြယ်ဖြူ လူနာတင်ယာဉ်တို့ဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်နေရာသို့ "ရွှေရောင်သမိုင်း" အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် လူမှုအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း (ERSSDO) အက်စ်ဒိုမှ လူနာတင်ယာဉ် (၁)စီးဖြင့် သွားရောက်၍ ကျန်ရှိနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး အနည်းငယ်မူးမောနေသဖြင့် ရှုဆေးပေးကာ ပြုစုပေးခဲ့ပါသည်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ဖွဲ့မှ အထောက်အကူပြုယာဉ် (၁)စီးနှင့် လှိုင်အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာအသင်းမှ လူနာတင် ယာဉ် (၁)စီး တို့လည်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
#မရမ်းကုန်းဦးမိုး #Myanmar_Online_News #YBS #မီနီဘတ်စ်ယာဉ်
(၁၉.၁၁. ၂၀၁၉-အင်္ဂါနေ့) ၊ နံနက် (၀၇:၀၀) နာရီအချိန်ခန့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်ကမ္ဘာအေးဗီလာရှေ့တွင် YBS ခရီးသယ်တင်ယာဉ်(၁)စီးနှင့် မီနီဘတ်စ်ယာဉ်(၁)စီးတို့ တိုက်မိပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၆)ဦးခန့်ရှိကြောင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ အား K-Ambulance ၊ မြန်မာ့ကြယ်ဖြူ လူနာတင်ယာဉ်တို့ဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။ ဖြစ်စဉ်နေရာသို့ "ရွှေရောင်သမိုင်း" အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် လူမှုအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း (ERSSDO) အက်စ်ဒိုမှ လူနာတင်ယာဉ် (၁)စီးဖြင့် သွားရောက်၍ ကျန်ရှိနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး အနည်းငယ်မူးမောနေသဖြင့် ရှုဆေးပေးကာ ပြုစုပေးခဲ့ပါသည်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ကြက်ခြေနီသူနာပြုတပ်ဖွဲ့မှ အထောက်အကူပြုယာဉ် (၁)စီးနှင့် လှိုင်အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာအသင်းမှ လူနာတင် ယာဉ် (၁)စီး တို့လည်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။